dulsaarka General markii lacagtii amaahashada ka bangiga
トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ dulsaarka General markii lacagtii amaahashada ka bangiga
Haddii aad lacag ka amaahato hay'adaha maaliyadeed, marka hore si ay u soo noqon lahayd dad badan oo bangiga in.
dareenka ammaanka, sababta oo ah in loo arko sida ka badan sida maaliyadda macaamiisha.
Si kastaba ha ahaatee, waxaan ka bangiga amaahan xoogaa lacag ah, waxaad sidoo kale laga yaabaa in yar oo aqoon u leh sida badan dulsaarka si aad u hesho nidaamsan. Waxa aad barayaa in baaritaan amaahda iyo dulsaarka bangiga
la xiriira / faa'iidada iyo khasaaraha
in ay lacag soo amaahato bangiga
qofka ugu horeeya inaad soo amaahato lacag Haddii
ay dhacdo kuwa amaahdo lacag ugu horeysay, dulsaarka waa sarrifka waa sanad in qiyaastii 4%. Haddii
amaahday haddii hal bil 100,000 yen, dulsaarka uu noqon doono 100,000 yen × 4% × 30/365 = 328 yen.
Currently, canshuurta isticmaalka waa 8% Zaman. Haddii qeybtii
of this, waxaan u maleynayaa in aad u hoosaysa, dad badani dareemaan.
By habka, marka aad lacag soo amaahday maaliyadda macaamiisha, oo ku saabsan 4.5% ilaa 5%, waa qiimaha suuqa.
oo keliya, haddii wax isbedel ah oo ku wareegsan 1%, waxaa laga yaabaa in aad sidoo kale kuwa qabaa oo aad samaysid ma aha fiican Maaliyadda macaamilka waxaa sidoo kale waa sida fudud baaritaan image uma badna.
Si kastaba ha ahaatee, haddii aad amaahatay 100,000 yen isla shuruudaha, danta soo bixi doonaan 369 yen in 410 yen iyo farqiga.
in uu yahay, taas waa marka qadar weyn, sida 300,000 yen iyo 500,000 yen, oo ayan u adag tahay in la damacsan furitaanka farqi weyn.
Haddii aad wada amaahatay ilaa xad, tan iyo farqiga u of qadarka this noqon doonto culays weyn, waxaan ku talinaynaa amaahasho bangiga dulsaarka hooseeyo xataa 1%.
< H2> Haddii aad isticmaalayso shirkado badan
waxaa laga soo amaahday bangiga badan ama maaliyadda macaamiisha, waxa ay noqon lacagta dulsaarka ka sareeyo.
In amaah card ee bangiyada waaweyn ee, waa celcelis ahaan ay u badan tahay ee ku saabsan 14% waxaa la siiyaa sida xad sare. Haddii cusub amaahatay
30 million oo lacagta dulsaarka ah ee bil walba uu noqon doono \_ 3.452. Kanu waa warka culus
ma aha oo kaliya in, sidoo kale waa in ay ahaadaan dabcan xisaabiyaa cadadka xiiso in lagu amaahdo by shirkadaha kale. Dadka amaahashada in malaayiin
, haddii aad leedahay dulsaarka 14 boqolkiiba ah, waxaad u baahan tahay inaad bixiso dulsaar bishii \_ 11.506.
ay dhacdo hab bixinta slide guud, tan iyo xaddiga lacagta oo la isku daray maamulaha la soo bandhigay sida lacagta, waxaa laga yaabaa in aad warka culus dhabta ah waa la hayaa waxay aaminsan yihiin in 15,000 in 20,000 oo yen ugu yaraan.
xataa sidii lagu falay kuwii habsami leh marka aad amaahato lacag, markii ugu abaalgudo degdegga ah waxaa la odhan karaa in ay dad badan inay halgan at qayb ka mid ah xiisaha.
Xitaa hoos u bixinta bil kasta, dhab ahaantii, ma soo celin xiiso kaliya, waxa aan ka yarayn waa sheeko in.
si ay u amaahan at a hoose ka badan
dulsaarka si loo yareeyo culeyska
, waxaa muhiim ah in la doorto shirkad yar yahay dulsaarka. Taas oo uu sheegay
, dulsaarka in xayaysiinta ku qoran yihiin waxa ku qoran badan oo kala duwan ka soo xad sare oo xadka hoose, marka si dhab ah ay u isticmaalaan, iyo waxa ka amaahan kartaa dulsaarka wax ma oga, lahaa oo aan fara yarayn kan qabaa walaac ah . In si ay u hoos ka dulsaarka
socda xaaladaha waxaa muhiim ah.
haddii uu jiro dakhli ah oo deggan
for amaahda ugu horeysay yahay, si ay u faa'iidaystaan ??dulsaar yar, waxaa muhiim ah in aad hesho qaar ka mid ah dakhliga joogto ah.
Dabcan, sare in ay u helaan dakhli sannadle ah, waa in muhiim ah, laakiin waxa uu noqday a shuruudaha qiimo muhiim u ah bangiyada waa in "haddii dadka si fiican u soo laaban karaan, xataa muddo."
ama caga amaahda waa sida badan ee
Waa In the case of dadka
leeyahay badan oo ah amaahda, u muuqdaan in ay dhab ahaan dulsaarka ka sareeyo.
Sayidka, hab ah in aad rabto in aad ka fiirsan waxaa la dhimayaa caga amaahda.
aad xoojinta deynta waa in ay ku dhicin this category, laakiin Marka aad leedahay mid ka mid ah hay'adaha maaliyadeed bangiga dulsaarka hooseeyo si aad u amaahatid, waxay keeni doontaa in la yareeyo bixinta ayaa ugu danbeyn. Tan iyo maareynta halista noqdo fududahay in ay ka dhinac bangiga
, waxay u badan tahay in la amaahdo doonaa dulsaar yar yahay.
markii ugu horeysay ee aad amaahato lacag bangiga, dulsaarka ku saabsan tahay 5% la barbardhigo maaliyadda macaamiisha, ilaa 4 boqolkiiba noqon doontaa qiimaha uu suuqa ka.
Sidaa darteed, waxay sidoo kale si ay u rar debit ay yar tahay in ay jeebka ugu, Waxaa muhiim ah in aad ka fikirto isticmaalka bangiga in meesha ugu horeysa. Taas oo uu sheegay
, haddii wax dhib ah maleh sida adag waa macluumaad credit u gaar ah sidoo kale waa in heerka bangiga, dan kasta oo kaliya halkaas oo xaalado wanaagsan ilaa dhammaan doontaa sare.
haddii, haddii xaaladda ay amaahatay in hay'adaha kale ee maaliyadda, ee gobolka, taas oo sidoo kale xoojinta deynta gol leeyahay si ay u hubiso in aad u dooran karta in faa'iido kasta oo kale. Marka caching ku
, sidan, "ama amaahatay fududahay in" kaliya ma "ama bixinta fudud, dulsaarka nugul ama u hooseeyo" waa in aynu u malayno waa muhiim.
Ama caga amaahda waa sida badan waa
ay dhacdo qof kaas oo kala duwan oo ah amaahda, u muuqdaan in ay dhab ahaan dulsaarka ka sareeyo.
Marka ugu horraysa ee aad amaahato lacag
Bank, in ay dhacdo maaliyadda macaamiisha in dulsaarka ee ku saabsan 5%, qiyaastii 4% ka ah, waxay noqon doontaa qiimaha uu suuqa ka.